Maninona no miandry ny UNWTO General Assembly? Efa napetraka ny sekretera jeneraly vaovao?
Home » Travel Associations News » Maninona no miandry ny UNWTO General Assembly? Efa napetraka ny sekretera jeneraly vaovao?
Jolay 9, 2017
Io no fifidianana be mpiresaka indrindra sy be mpifaninana indrindra ataon'ny komity mpanatanteraka ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Betsaka ny mpitarika ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny governemanta no nampiseho fisalasalana lehibe raha toa ka hanamafy ny tolo-kevitry ny Filan-kevi-pitantanana ny UNWTO General Assembly amin'ity indray mitoraka ity.
Ilaina io fanamafisana io ho an'ny kandidà Ambasadaoro Zurab Pololikashvili. Ity dingana ity dia hatao mandritra ny fivorian'ny UNWTO General Assembly ao Chengdu, Sina amin'ny volana septambra 2017.
Vantany vao voamarina ny fe-potoan'ny vaovao Sekretera jeneralin'ny UNWTO dia hanomboka amin'ny 1 Janoary 2018
Ny fotoana hatramin'ny septambra ka hatramin'ny faran'ny taona dia azo nampiasaina mora foana tamin'ny sekretera jeneraly ankehitriny mba hampisehoana ny sekretera jeneraly-voafidy ny fomba fiasan'io rafitra io.
Raha ny angom-baovao voaray avy amin'ny eTN dia efa natomboka aloha io dingana io ary mbola tsy voamarina akory ilay voatendry. Ny sasany ao amin'ny Organisation dia gaga sy miahiahy, ny sasany kosa mahita fa tsy maintsy eken'ny komandy amin'ny talen'ny fizahan-tany vaovao ny handray anjara amin'ny fivoriana ambony.
Andriamatoa Pololikasvili dia nanatrika fifanakalozan-kevitra roa momba ny fitantanana ambaratonga ambony ao Madrid, izay matetika no tsy misokatra afa-tsy amin'ny sekretera jeneraly sy ny boriboriny akaiky sy ny talen'ny tariny.
"Sekretera jeneraly UNWTO" no maso ivoho Pololikashvili navoaka ho azy tamin'ny award-tourism.com . Ny loka dia fantatra amin'ny anarana hoe "Oscar" amin'ny fanekena ny fizahan-tany Zeorziana. Ny loka nasionalin'ny fizahantany dia nanendry an'i Zurab ho mpitsara.
Ny loka dia mahazo fanohanana lehibe avy amin'ny governemanta Zeorziana sy avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny National Tourism Administration of Georgia dia mpiara-miasa amin'ity tetik'asa ity, ny Ministeran'ny Toekarena sy ny fampandrosoana maharitra an'i Georgia sy ny lapan'ny tanàna Tbilisi dia mpanohana ofisialy.
Ny iraka lehibe amin'ny tetik'asa dia ny famporisihana ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny any Georgia ary hampiroborobo ny fahatsiarovan-tena amin'ny asa fizahan-tany be fizahan-tany sy marika mamorona endrika tsara ny firenena manerantany.
Ny lanonana mari-pankasitrahana dia fotoana iray hiarahan'ny manampahefana nasionaly sy eo an-toerana, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, mpandraharaha fizahan-tany, masoivohon'ny fizahan-tany, orinasan-divay sy maro hafa.
Mazava ho azy, ny olona ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Georgia dia faly mahita olona iray avy amin'ny fireneny hotendrena ho amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fizahan-tany. Mety hanazava ny olona iray fa mety tsy hijery ny toerana mbola tsy voamarina.
Hetsika hafa tsy nampoizina ihany koa ny nihaonan'i Pololikashvili tamin'ny minisitry ny fizahan-tany Bulgarian Angelkova ary niresaka momba ny olana tsy misy ifandraisany amin'ny UNWTO fotsiny fa tsy ny zavatra hafa mifandraika amin'ny olana roa tonta eo amin'i Georgia sy Bulgaria ihany.
Ny tatitra iray tamin'ny haino aman-jery Bolgara dia nilaza hoe: "Ny minisitry ny fizahantany Bulgaria Angelkova dia nihaona tamin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Nominee Pololikashvili dia nanao fivoriana niasa tao Belgrad tamin'ny Konferansa momba ny fizahantany maharitra ao amin'ny Faritra Danube."
"Izy roa dia nihevitra ny fahafahan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny minisiteran'ny fizahantany sy ny UNWTO, ary koa ny fandraisana andraikitra hiasa ho amin'ny fampandrosoana maharitra ny sehatra. Angelkova dia nampahafantatra an'i Pololikashvili ireo dingana noraisin'i Bulgaria ho fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany ary nanome toky azy fa ny firenena dia mbola ho iray amin'ireo mpikambana UNWTO mavitrika indrindra. "
Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny minisitra Bolgara fa tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety dia nanohana ny kandidà Zeorziana tamin'ny latsa-bato azony. Bulgaria dia mpikambana ao amin'ny UNWTO Executive Council.
Mety ho hetsika tsara ho an'i Zurab ny tena hiatrika ny haino aman-jery ary hamaly fanontaniana vitsivitsy momba ity fihaonana ity sy ireo olana hafa. Tsy nisy izany mangarahara izany.